Warcraft, DotA နဲ့ Dota2– REDPlayer
ကျွန်တော်တို့ Dota2hero lore တွေကို အပျော်အဖြစ် ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ Comment Section မှာ DotA နဲ့ မတူဘူးနော် ဘာညာ ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း တတ်နိုင်သလောက် ရှင်းပြပေမဲ့ လူတိုင်းကို ရှင်းပြဖို့ မလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖြစ်တာပါ။ ဘာမှမပြောဖြစ်တာထက်စာရင် ဒီ စာကတော့ အထောက်အကူဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ comment တိုင်း message တွေတိုင်းကို အချိန်ပေးပြီး မပြန်နိုင်တာလည်း ပါပါတယ်။
စာတော့ရှည်ပါလိမ့်မယ်။ လုံးဝမသိသေးတဲ့ သူတွေကနေ ရေးတေးတေးဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်လိုက်ပါတယ်။ အစီအစဉ် အလိုက် Warcraft, DotA, Dota2ဆိုပြီးတော့ ခွဲပေးလိုက်ပါတယ်။
Warcraft ကတော့အားလုံးရဲ့ အစလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။ 1994 မှာထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ developer က Blizzard Entertainment ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်စောလွန်းနေသေးတဲ့ အတွက် အငယ်တွေကတော့ သိချင်မှသိပါလိမ့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ local မှာနေပြီး အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဆော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ အခုဖတ်နေတဲ့ ခင်ဗျားက early gaming ကိုမှီခဲ့တဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောပါရစေ။
World of warcraft (wow) တစ်ခုလုံးဖြစ်လာဖို့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အဓိက ဂိမ်း ၅ခုရှိပါတယ်။
Warcraft :Orcs & Humans
ဒီဂိမ်း ၅ခုပေါင်းမှသာ wow ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အစောပိုင်းထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ နံပါတ် (၃) အထိကတော့ real-time strategy game တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Warcraft II မှာ Beyond the dark portal နဲ့ III မှာတော့ The Frozen Throne ဆိုတဲ့ Expension တွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဒီလိုပါ။ Warcraft ရဲ့ကမ္ဘာက Azeroth ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာမှာ ဇာတ်အိမ်တည်ဆောက် ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ High-fantasy အယူအဆမျိုးဖြစ်ပါတယ် (အလွန်အကျူးစိတ်ကူး ယဉ်ထားတာကိုပြောတာ၊ glossary သွားမကြည့်နဲ့တော့ မထည့်ရသေးဘူးဗျ)။ ကနဦးအစပိုင်းမှာ လူသားတွေနေထိုင်နေတဲ့ Eastern Kingdoms ဆိုတဲ့ နေရာတွေရယ် Orcish Horde ဆိုတဲ့ တစ်ခြားကမ္ဘာကနေ (dark portal “အောက်လမ်းမုခ်ဝ” //ကိုယ်ထွင်တာလည်းမဟုတ်တော့ ဒီလိုရေးလိုက်တယ်ဗျာ// ) ကိုဖြတ်ပြီးရောက်လာတဲ့ Orcs တွေရယ် ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ကြတဲ့ အချိန်ကစပါတယ်။ Orcs တွေလာတဲ့ ကမ္ဘာကတော့ Draenor ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကလာတာပါ။ နံပါတ် II မှာ demonic magic (အောက်လမ်းမှော်) တွေကြောင့်ပျက်စီးတော့မယ့် ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ warcraft I,II,III ၃ပိုင်းက တစ်ခုအဆုံးသတ်တဲ့ နေရာကနေ နောက်အပိုင်းမှာဇာတ်လမ်းဆက် သွားထားပါတယ်။
လူသားတွေရဲ့ ကမ္ဘာ Azeroth ကဇာတ်လမ်းစတဲ့ အချိန်မှာ အဓိက ကုန်းမြေတိုက်ကြီး အဖြစ် ၂ ပိုင်းပဲ ပါခဲ့တာပါ။အရှေ့နဲ့ အနောက်တည်ရှိပြီး great sea ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ကြီးခြားနေပါတယ်။ အလယ်မှာတော့ Maelstorm ဆိုတဲ့ အမြဲမပြတ် ဖြစ်ပေါ်မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ Azeroth ကို ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလိုပဲ ကုန်းမြေတိုက်ကြီးတွေ ထပ်ထည့်ပြီးတော့ Kalimdor, Northrend, Pandaria နဲ့ Broken Isles ဆိုပြီးတိုးပွားလာပါတယ်။ နောက်ထပ် တစ်ခြား အဓိကပါဝင်လာတော့မယ် မျိုးနွယ်စုတွေဖြစ်တဲ့ Nightelves, Tauren, dwarves, gnome, trolls တွေအပြင် forsaken, draenei စတဲ့ နောက်ခံ သမိုင်းသေသေချာချာရှိတဲ့ မျိုးနွယ်အများပြားကိုလည်း တဖြည်းဖြည်းမိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ မူလကတည်းကလည်း လူသားတွေနေထိုင်ရာ Stormwind, Dwarf တွေရဲ့ Khaz Modan စတာတွေကနာမည်ကြီးတွေပါ။ ထားပါတော့ ဒါတွေကတော့ wow ကိုတကယ် ကစားကြည့်စေချင်လာတာမျိုးပါ။
ဒီလိုနဲ့ 2004 မှာတော့ အရင် realtime strategy တွေအစား MMORPG ဖြစ်တဲ့ world of warcraft ကိစတင်ခဲ့ပါတယ်။ free online game တစ်ခုမဟုတ်ပဲ လစဉ်ကြေးပေးရပါတယ်။ Update တွေကိုတော့ ပုံမှန် patch တွေအနေနဲ့ download လုပ်ရပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လစဉ်ကြေးပေးပြီး လူအများဆုံးဆော့တဲ့ MMORPG ဖြစ်ပါတယ်။ လစဉ်ကြေးပေးထားတဲ့ Player အားလုံး ၁၂သန်း ကျော်အထိ အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ပါတယ်။ 2016 အထိ အားလုံးပေါင်း expension6ခုထွက်ရှိထားပါတယ်။ (ခုနှစ်အလိုက် ဇယားချထားပေးပါတယ်။)
တကယ်ကတော့ Warcraft ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ပြည့် တဲ့နေ့ 10th November 2004 မှာ World of Warcraft ကိုဖြန့်ချိခဲ့တာပါ။
1996 Warcraft II : Beyond the Dark Portalr
1999 Warcraft II : Battle.net edition
2002 Warcraft III : Reign Of Chaos
2003 Warcraft III : The Frozen Throne
2007 World of Warcraft : The Burning Crusade
2008 World of Warcraft : Wrath of the Lich King
2010 World of Warcraft : Cataclysm
2012 World of Warcraft : Mists of Pandaria
2014 Hearthstone : Heroes of Warcraft
2014 World of Warcraft : Warlords of Draenor
2016 World of warcraft : Legion
တစ်ဆက်တည်းပြောပါရစေ၊ wow အတွက် သီးခြား boardgame, cardgame, Novels, comics, manga, magazine နဲ့ 2016 မှာဆိုရင် ရုပ်ရှင်တစ်ကားအထိထွက်ထားခဲ့ပြီးပါပြီ။
အပေါ်ကအကုန်လုံးကတော့ Warcraft, World of Warcraft ဖြစ်ပါတယ်။
Warcraft ရဲ့ realtime strategy game3ခုမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Warcraft III မှာ expension အပြင် Mod လည်းရှိပါတယ်။ Mod ဆိုတာမျိုးကတော့ community ထဲကတစ်ယောက်ယောက်က (ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့) ဒီဂိမ်းအတွက် တစ်ခြားစိတ်ဝင်စားသူတွေပါဆော့လို့ရအောင် သီးခြား ဖန်တီးထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မူလ developer နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ အခြေခံတွေအားလုံးကတော့ မူရင်း ဂိမ်းကပဲယူတာပါ။ ဇာတ်ကောင်တွေ၊ အရုပ်တွေ၊ သူတို့ရဲ့ နောက်ခံဇာတ်လမ်းတွေ အကုန်တူတူပါပဲ။ သူ့ကို Blizzard ရဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ Starcraft II ထဲမှာပါတဲ့ Aeon of Strife ဆိုတဲ့ မြေပုံကို အခြေခံပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ Warcraft ရဲ့ Reign of Chaos မှာပါရှိတဲ့ World Editor နဲ့ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ အစကတော့ ကွဲလွဲမှုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အတိုဆုံး Defense of the Ancient (DotA) ဆိုပြီး ငြိမ်သွားပါတယ်။ DotA ကို တာဝန်ယူ ဖန်တီးခဲ့တာ ၃ ဆက်ရှိတယ်လို့တော့ အကြမ်းသိပါတယ် (ပြန်ဖတ်ရမှာပျင်း… မှတ်လည်းမမှတ်မိ… အဟီး)။ 2000 ခုနှစ်ကနေနောက်ပိုင်းကတော့ Ice Frog ကပဲ ဆက်ပြီး ပုံဖော်ခဲ့တာပါ။
အကြမ်းပြောရရင် သူမှာ Sentinal နဲ့ Scourge ဆိုပြီးတော့ player ကထိန်းကျောင်းရတဲ့ hero ဆိုတဲ့ တစ်ဦးချင်း ကိုယ်ပိုင် မတူတဲ့ အစွမ်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ ၅ ယောက်ပါအဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ပါပြီး အသင်း ၂ သင်းရဲ့ အတွင်း ခံစစ်ထဲမှာ အခိုင်အမာကာရံ ကာကွယ် ထားတဲ့ Ancient ဆိုတဲ့ အဆောက်အဦးကို တစ်ဘက်ဆီက အရင်ဆုံး ဖျက်ဆီးနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ရတာပါ။ (တစ်ကြောင်းတည်း ရှင်းလိုက်တာ… 😛 )
ဒီတော့ သူက MOBA ဖြစ်ပါတယ်၊ MMORPG လည်းမဟုတ်ဘူး၊ strategy လည်းမဟုတ်ပါဘူး။
2005 လောက်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက (Player တွေပဲပြောတာ) Counter-Strike ကစားသလောက်ကို လိုက်ကစားနေကြပြီ။ သူက free ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်ကမှလည်း support လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး၊ ပြီးတော့ အဲ့အချိန်မှာ ခုလိုပဲ ဆွေးနွေးကြ၊ ရန်ဖြစ်ကြ ပြန်ချစ်ကြနဲ့ ဖြစ်နေပြီ။ World wide tournments တွေလည်းစနေပါပြီ။ Community ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ အတွက် အမှားတွေအများကြီးရှိတဲ့ ဂိမ်းကို community member တစ်ယောက် အနေနဲ့ glitch တွေတွေ့တိုင်း forum တက်ပြောရတာ မှတ်မိကြဦးမှာပါ။ (glitch ဆိုတာက ဒီလိုလုပ်ရင် ဒီ အတိုင်းဖြစ်ရမှာကို မဖြစ်ပဲ ဟိုလိုဖြစ်သွားတာကိုပြောတာ၊ RP glossary မှာတော့ မဖြည့်ရသေးဘူး။)
Riot ကနေ (အခု Fortnite ထုတ်တဲ့ developer) League Of Legends ဆိုပြီး DotA ကိုရေးရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ developer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Guinsoo ကို ငှားပြီးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ S2 Games ကလည်း Heros of Newerth ဆိုပြီးထွက်တယ်။ နောက်ဆုံး Blizzard ကိုယ်တိုင်က Heroes of the Storm ဆိုပြီးတော့ သူထွက်ထားသမျှ ဂိမ်းတွေထဲက Hero တွေနဲ့ တစ်ခုထုတ်တယ်။ Warcraft ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေသိတဲ့ Gul’dan စုန်းအဖိုးကြီးကနေ နှစ်ချို့ဂိမ်မာတို့သိတဲ့ Diablo ထဲက Tyrael ၊ နောက်ဆုံး Starcraft မင်းသား Raynor ကြီးအထိပါတယ်။(mechanic တူတာကိုပြောတာပါ)။
အထက်ဖေါ်ပြပါ တွေက DotA ရဲ့ကိစ္စတွေ၊ ခုအချိန်မှာ (History လို့ပြောမှာပေါ့) ဘယ်သူမှစိတ် မဝင်စားတော့ပါဘူး။
2009 မှာစတယ်ထင်တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ဒီလပဲ၊ 2009 October မှာ ခုဏက DotA mod ကိုရေးခဲ့တဲ့ IceFrog ကြီးကို Valve Corporation ဆိုတဲ့ CS:GO နဲ့ Steam ရဲ့ပိုင်ရှင်ကြီး (လက်ရှိ game distribution မှာ ဖိန့်ဖိန့်တုန်ကြီးပေါ့လေ၊) ကကောက်ယူမွေးစားလိုက်တဲ့ (ငှားလိုက်တာ၊ အလုပ်ခန့်လိုက်တာ) အချိန်မှာတော့ ခု dota ကိုချစ်တယ် dota ကိုမြတ်နိုးတယ်၊ dota နဲ့ နေမယ်ဆိုတဲ့ Dota2ဆိုတာဖြစ်လာတော့တာပဲ။ Game Royalty ကောင်းလွန်းတဲ့ အတွက် Dota2ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ ဂိမ်းတွေ မဆော့ဘူးဆို့တဲ့ သူတွေဖြစ်လာတဲ့ အထိပါပဲ။
Okie.. ဟုတ်ပြီ၊ ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ ထုတ်လို့ရသလား၊ …. “နိုးပါ”… မရပါဘူး၊ Ice Frog ကိုငှားလိုက်တိုင်း ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ နေရာလိုမျိုး သူလုပ်နေသမျှ အလုပ်ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာတွေ အကုန် ပါမလာပါဘူး။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဖန်တီးမှုကို တန်ဖိုးထားတဲ့ လောက ဖြစ်တဲ့ အလျှောက် Valve အနေနဲ့ Dota2ကို အစအဆုံးပြန်ပြီး ဖန်တီးယူရပါတယ်။ Mechanic (သဘောတရား) တူပေမယ့် ကျန်တဲ့ ကိစ္စတွေ အကုန် အသစ် ပြန်ဖန်တီးရတာပါ။ Hero တစ်ကောင်ချင်းစီရဲ့ ရုပ်ထွက်၊ သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်း၊ သူတို့ နေထိုင်ရာဒေသ စတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ တစ်ခြားအသေးစိတ်ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီးပါ၊ စာလေးသွားလိမ့်မယ်၊ မထည့်တော့ပါဘူး။ Database လာတော့မှပဲဖတ်ကြတာပေါ့။ ဆိုချင်တာက World တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြင်ရတာပါ။
အားလုံးကို အတိုချုံးပြောရရင်…. အဟမ်း….
Blizzard က warcraft ကိုထုတ်တယ်၊ ၃ခုမြောက်မှာ မှ Mod တစ်ခုကနေ DotA ဆိုတာမွေးဖွားလာတယ်၊ လူကြိုက်များတယ်၊ နောက်ပိုင်င်းမှာ Mod ရေးတဲ့သူကို Valve ကငှားလိုက်တယ်၊ Dota2ကို ထုတ်တယ်၊ copy right ငြိနိုင်တဲ့ အတွက် သီးခြား ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သွားအောင် သူ့ရဲ့ mechanic ကိုမပြင်ပဲ တစ်ခြား ဇာတ်လမ်းနဲ့ နောက်ကြောင်းတွေပြင်လိုက်တယ်။ လူကြိုက်ပိုများသွားတယ်၊ ဒါပါပဲ၊ (ထိပ်ဆုံးမှာ အဲ့လိုရေးလိုက်လို့ရသားပဲ)။
Warcraft နဲ့ DotA ဆိုင်သလားမေးရင် ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့၊ Warcraft က Blizzard ကထုတ်တဲ့ ကုမ္ဗဏီထွက် real-time strategy game တစ်ခု၊ အဲ့လိုပဲ wow က MMORPG တစ်ခု၊ DotA က community ကပေါက်ပွားလာပြီးတော့ community ကပဲ လမ်းကြောင်းခဲ့တာ။ DotA နဲ့ Dota2နဲ့ဆိုင်သလားမေးရင်လည်း သီးခြားစီပါ။ Dota2က Valve ကနေထွက်လာတဲ့ သီခြား Stand-alone MOBA ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပါဗျာ။ အခုလို ဆုံးအောင်ဖတ်ပြီး အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
Ref : wow wiki, youtube
ကြှနျတျောတို့ Dota2hero lore တှကေို အပြျောအဖွဈ ဖျောပွတဲ့အခါမှာ Comment Section မှာ DotA နဲ့ မတူဘူးနျော ဘာညာ ဆိုတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့လညျး တတျနိုငျသလောကျ ရှငျးပွပမေဲ့ လူတိုငျးကို ရှငျးပွဖို့ မလှယျကူတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒီပိုဈ့ကို ရေးဖွဈတာပါ။ ဘာမှမပွောဖွဈတာထကျစာရငျ ဒီ စာကတော့ အထောကျအကူဖွဈမယျထငျပါတယျ။ comment တိုငျး message တှတေိုငျးကို အခြိနျပေးပွီး မပွနျနိုငျတာလညျး ပါပါတယျ။
စာတော့ရှညျပါလိမျ့မယျ။ လုံးဝမသိသေးတဲ့ သူတှကေနေ ရေးတေးတေးဖွဈနတေဲ့ သူတှအေတှကျပါ ရညျရှယျလိုကျပါတယျ။ အစီအစဉျ အလိုကျ Warcraft, DotA, Dota2ဆိုပွီးတော့ ခှဲပေးလိုကျပါတယျ။
Warcraft ကတော့အားလုံးရဲ့ အစလို့ပွောရမယျထငျတယျ။ 1994 မှာထုတျခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ developer က Blizzard Entertainment ဖွဈပါတယျ။ သိပျစောလှနျးနသေေးတဲ့ အတှကျ အငယျတှကေတော့ သိခငျြမှသိပါလိမျ့မယျ၊ ဒါမှမဟုတျ ဆော့ဖွဈခဲ့တဲ့ သူတှလေညျးရှိပါလိမျ့မယျ။ local မှာနပွေီး အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက ဆော့ဖွဈခဲ့တယျဆိုရငျတော့ အခုဖတျနတေဲ့ ခငျဗြားက early gaming ကိုမှီခဲ့တဲ့ အတှကျ ဂုဏျယူပါတယျလို့ပွောပါရစေ။
World of warcraft (wow) တဈခုလုံးဖွဈလာဖို့ တညျဆောကျထားတဲ့ အဓိက ဂိမျး ၅ခုရှိပါတယျ။
ဒီဂိမျး ၅ခုပေါငျးမှသာ wow ရဲ့အနှဈသာရဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အစောပိုငျးထုတျလုပျခဲ့တဲ့ နံပါတျ (၃) အထိကတော့ real-time strategy game တှပေဲဖွဈပါတယျ။ Warcraft II မှာ Beyond the dark portal နဲ့ III မှာတော့ The Frozen Throne ဆိုတဲ့ Expension တှရှေိခဲ့ပါတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဒီလိုပါ။ Warcraft ရဲ့ကမ်ဘာက Azeroth ဆိုတဲ့ ကမ်ဘာမှာ ဇာတျအိမျတညျဆောကျ ထားတာဖွဈပွီးတော့ High-fantasy အယူအဆမြိုးဖွဈပါတယျ (အလှနျအကြူးစိတျကူး ယဉျထားတာကိုပွောတာ၊ glossary သှားမကွညျ့နဲ့တော့ မထညျ့ရသေးဘူးဗြ)။ ကနဦးအစပိုငျးမှာ လူသားတှနေထေိုငျနတေဲ့ Eastern Kingdoms ဆိုတဲ့ နရောတှရေယျ Orcish Horde ဆိုတဲ့ တဈခွားကမ်ဘာကနေ (dark portal “အောကျလမျးမုချဝ” //ကိုယျထှငျတာလညျးမဟုတျတော့ ဒီလိုရေးလိုကျတယျဗြာ// ) ကိုဖွတျပွီးရောကျလာတဲ့ Orcs တှရေယျ ကမ်ဘာစဈကွီးဖွဈကွတဲ့ အခြိနျကစပါတယျ။ Orcs တှလောတဲ့ ကမ်ဘာကတော့ Draenor ဆိုတဲ့ ကမ်ဘာကလာတာပါ။ နံပါတျ II မှာ demonic magic (အောကျလမျးမှျော) တှကွေောငျ့ပကျြစီးတော့မယျ့ ကမ်ဘာတဈခုဖွဈပါတယျ။ warcraft I,II,III ၃ပိုငျးက တဈခုအဆုံးသတျတဲ့ နရောကနေ နောကျအပိုငျးမှာဇာတျလမျးဆကျ သှားထားပါတယျ။
လူသားတှရေဲ့ ကမ်ဘာ Azeroth ကဇာတျလမျးစတဲ့ အခြိနျမှာ အဓိက ကုနျးမွတေိုကျကွီး အဖွဈ ၂ ပိုငျးပဲ ပါခဲ့တာပါ။အရှနေဲ့ အနောကျတညျရှိပွီး great sea ဆိုတဲ့ ပငျလယျကွီးခွားနပေါတယျ။ အလယျမှာတော့ Maelstorm ဆိုတဲ့ အမွဲမပွတျ ဖွဈပျေါမုနျတိုငျးကွီးတဈခုရှိပါတယျ။ နောကျပိုငျး မှာတော့ Azeroth ကို ကြှနျတျောတို့ကမ်ဘာလိုပဲ ကုနျးမွတေိုကျကွီးတှေ ထပျထညျ့ပွီးတော့ Kalimdor, Northrend, Pandaria နဲ့ Broken Isles ဆိုပွီးတိုးပှားလာပါတယျ။ နောကျထပျ တဈခွား အဓိကပါဝငျလာတော့မယျ မြိုးနှယျစုတှဖွေဈတဲ့ Nightelves, Tauren, dwarves, gnome, trolls တှအေပွငျ forsaken, draenei စတဲ့ နောကျခံ သမိုငျးသသေခြောခြာရှိတဲ့ မြိုးနှယျအမြားပွားကိုလညျး တဖွညျးဖွညျးမိတျဆကျပေးလာခဲ့ပါတယျ။ မူလကတညျးကလညျး လူသားတှနေထေိုငျရာ Stormwind, Dwarf တှရေဲ့ Khaz Modan စတာတှကေနာမညျကွီးတှပေါ။ ထားပါတော့ ဒါတှကေတော့ wow ကိုတကယျ ကစားကွညျ့စခေငျြလာတာမြိုးပါ။
ဒီလိုနဲ့ 2004 မှာတော့ အရငျ realtime strategy တှအေစား MMORPG ဖွဈတဲ့ world of warcraft ကိစတငျခဲ့ပါတယျ။ free online game တဈခုမဟုတျပဲ လစဉျကွေးပေးရပါတယျ။ Update တှကေိုတော့ ပုံမှနျ patch တှအေနနေဲ့ download လုပျရပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ လစဉျကွေးပေးပွီး လူအမြားဆုံးဆော့တဲ့ MMORPG ဖွဈပါတယျ။ လစဉျကွေးပေးထားတဲ့ Player အားလုံး ၁၂သနျး ကြျောအထိ အမွငျ့ဆုံးရောကျခဲ့ပါတယျ။ 2016 အထိ အားလုံးပေါငျး expension6ခုထှကျရှိထားပါတယျ။ (ခုနှဈအလိုကျ ဇယားခထြားပေးပါတယျ။)
တကယျကတော့ Warcraft ကိုထုတျလုပျခဲ့တဲ့ ၁၀နှဈပွညျ့ တဲ့နေ့ 10th November 2004 မှာ World of Warcraft ကိုဖွနျ့ခြိခဲ့တာပါ။
တဈဆကျတညျးပွောပါရစေ၊ wow အတှကျ သီးခွား boardgame, cardgame, Novels, comics, manga, magazine နဲ့ 2016 မှာဆိုရငျ ရုပျရှငျတဈကားအထိထှကျထားခဲ့ပွီးပါပွီ။
အပျေါကအကုနျလုံးကတော့ Warcraft, World of Warcraft ဖွဈပါတယျ။
Warcraft ရဲ့ realtime strategy game3ခုမှာနောကျဆုံးဖွဈတဲ့ Warcraft III မှာ expension အပွငျ Mod လညျးရှိပါတယျ။ Mod ဆိုတာမြိုးကတော့ community ထဲကတဈယောကျယောကျက (ဒါမှမဟုတျ အဖှဲ့တဈဖှဲ့) ဒီဂိမျးအတှကျ တဈခွားစိတျဝငျစားသူတှပေါဆော့လို့ရအောငျ သီးခွား ဖနျတီးထားတဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ မူလ developer နဲ့ဘာမှမဆိုငျပါဘူး။ အခွခေံတှအေားလုံးကတော့ မူရငျး ဂိမျးကပဲယူတာပါ။ ဇာတျကောငျတှေ၊ အရုပျတှေ၊ သူတို့ရဲ့ နောကျခံဇာတျလမျးတှေ အကုနျတူတူပါပဲ။ သူ့ကို Blizzard ရဲ့ဂိမျးတဈခုပဲဖွဈတဲ့ Starcraft II ထဲမှာပါတဲ့ Aeon of Strife ဆိုတဲ့ မွပေုံကို အခွခေံပွီးတညျဆောကျခဲ့ပါတယျ။ Warcraft ရဲ့ Reign of Chaos မှာပါရှိတဲ့ World Editor နဲ့ဖနျတီးခဲ့တယျလို့ပွောပါတယျ။ အစကတော့ ကှဲလှဲမှုတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ အတိုဆုံး Defense of the Ancient (DotA) ဆိုပွီး ငွိမျသှားပါတယျ။ DotA ကို တာဝနျယူ ဖနျတီးခဲ့တာ ၃ ဆကျရှိတယျလို့တော့ အကွမျးသိပါတယျ (ပွနျဖတျရမှာပငျြး… မှတျလညျးမမှတျမိ… အဟီး)။ 2000 ခုနှဈကနနေောကျပိုငျးကတော့ Ice Frog ကပဲ ဆကျပွီး ပုံဖျောခဲ့တာပါ။
အကွမျးပွောရရငျ သူမှာ Sentinal နဲ့ Scourge ဆိုပွီးတော့ player ကထိနျးကြောငျးရတဲ့ hero ဆိုတဲ့ တဈဦးခငျြး ကိုယျပိုငျ မတူတဲ့ အစှမျးတှကေိုပိုငျဆိုငျတဲ့ ၅ ယောကျပါအဖှဲ့ ၂ ဖှဲ့ပါပွီး အသငျး ၂ သငျးရဲ့ အတှငျး ခံစဈထဲမှာ အခိုငျအမာကာရံ ကာကှယျ ထားတဲ့ Ancient ဆိုတဲ့ အဆောကျအဦးကို တဈဘကျဆီက အရငျဆုံး ဖကျြဆီးနိုငျအောငျတိုကျခိုကျရတာပါ။ (တဈကွောငျးတညျး ရှငျးလိုကျတာ… 😛 )
ဒီတော့ သူက MOBA ဖွဈပါတယျ၊ MMORPG လညျးမဟုတျဘူး၊ strategy လညျးမဟုတျပါဘူး။
2005 လောကျမှာ တဈကမ်ဘာလုံးက (Player တှပေဲပွောတာ) Counter-Strike ကစားသလောကျကို လိုကျကစားနကွေပွီ။ သူက free ဖွဈတယျ၊ ဘယျကမှလညျး support လုပျထားတာမဟုတျဘူး၊ ပွီးတော့ အဲ့အခြိနျမှာ ခုလိုပဲ ဆှေးနှေးကွ၊ ရနျဖွဈကွ ပွနျခဈြကွနဲ့ ဖွဈနပွေီ။ World wide tournments တှလေညျးစနပေါပွီ။ Community ကဖနျတီးခဲ့တဲ့ အတှကျ အမှားတှအေမြားကွီးရှိတဲ့ ဂိမျးကို community member တဈယောကျ အနနေဲ့ glitch တှတှေတေို့ငျး forum တကျပွောရတာ မှတျမိကွဦးမှာပါ။ (glitch ဆိုတာက ဒီလိုလုပျရငျ ဒီ အတိုငျးဖွဈရမှာကို မဖွဈပဲ ဟိုလိုဖွဈသှားတာကိုပွောတာ၊ RP glossary မှာတော့ မဖွညျ့ရသေးဘူး။)
Riot ကနေ (အခု Fortnite ထုတျတဲ့ developer) League Of Legends ဆိုပွီး DotA ကိုရေးရာမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ developer တဈဦးဖွဈတဲ့ Guinsoo ကို ငှားပွီးထုတျခဲ့ပါတယျ။ S2 Games ကလညျး Heros of Newerth ဆိုပွီးထှကျတယျ။ နောကျဆုံး Blizzard ကိုယျတိုငျက Heroes of the Storm ဆိုပွီးတော့ သူထှကျထားသမြှ ဂိမျးတှထေဲက Hero တှနေဲ့ တဈခုထုတျတယျ။ Warcraft ရုပျရှငျကွညျ့ဖူးတဲ့သူတှသေိတဲ့ Gul’dan စုနျးအဖိုးကွီးကနေ နှဈခြို့ဂိမျမာတို့သိတဲ့ Diablo ထဲက Tyrael ၊ နောကျဆုံး Starcraft မငျးသား Raynor ကွီးအထိပါတယျ။(mechanic တူတာကိုပွောတာပါ)။
အထကျဖျေါပွပါ တှကေ DotA ရဲ့ကိစ်စတှေ၊ ခုအခြိနျမှာ (History လို့ပွောမှာပေါ့) ဘယျသူမှစိတျ မဝငျစားတော့ပါဘူး။
2009 မှာစတယျထငျတယျ။ မှတျမှတျရရ ဒီလပဲ၊ 2009 October မှာ ခုဏက DotA mod ကိုရေးခဲ့တဲ့ IceFrog ကွီးကို Valve Corporation ဆိုတဲ့ CS:GO နဲ့ Steam ရဲ့ပိုငျရှငျကွီး (လကျရှိ game distribution မှာ ဖိနျ့ဖိနျ့တုနျကွီးပေါ့လေ၊) ကကောကျယူမှေးစားလိုကျတဲ့ (ငှားလိုကျတာ၊ အလုပျခနျ့လိုကျတာ) အခြိနျမှာတော့ ခု dota ကိုခဈြတယျ dota ကိုမွတျနိုးတယျ၊ dota နဲ့ နမေယျဆိုတဲ့ Dota2ဆိုတာဖွဈလာတော့တာပဲ။ Game Royalty ကောငျးလှနျးတဲ့ အတှကျ Dota2ကလှဲရငျ ကနျြတဲ့ ဂိမျးတှေ မဆော့ဘူးဆို့တဲ့ သူတှဖွေဈလာတဲ့ အထိပါပဲ။
Okie.. ဟုတျပွီ၊ ဒီလိုလှယျလှယျနဲ့ ထုတျလို့ရသလား၊ …. “နိုးပါ”… မရပါဘူး၊ Ice Frog ကိုငှားလိုကျတိုငျး ကြှနျတျောရောကျနတေဲ့ နရောလိုမြိုး သူလုပျနသေမြှ အလုပျရဲ့ သကျဆိုငျရာတှေ အကုနျ ပါမလာပါဘူး။ တဈဦးတဈယောကျခငျြးစီရဲ့ ဖနျတီးမှုကို တနျဖိုးထားတဲ့ လောက ဖွဈတဲ့ အလြှောကျ Valve အနနေဲ့ Dota2ကို အစအဆုံးပွနျပွီး ဖနျတီးယူရပါတယျ။ Mechanic (သဘောတရား) တူပမေယျ့ ကနျြတဲ့ ကိစ်စတှေ အကုနျ အသဈ ပွနျဖနျတီးရတာပါ။ Hero တဈကောငျခငျြးစီရဲ့ ရုပျထှကျ၊ သူတို့ရဲ့ဇာတျကွောငျး၊ သူတို့ နထေိုငျရာဒသေ စတဲ့ ကိစ်စတှပေါ။ တဈခွားအသေးစိတျပွောငျးလဲမှုတှေ အမြားကွီးပါ၊ စာလေးသှားလိမျ့မယျ၊ မထညျ့တော့ပါဘူး။ Database လာတော့မှပဲဖတျကွတာပေါ့။ ဆိုခငျြတာက World တဈခုလုံးကိုပွနျပွငျရတာပါ။
အားလုံးကို အတိုခြုံးပွောရရငျ.… အဟမျး….
Blizzard က warcraft ကိုထုတျတယျ၊ ၃ခုမွောကျမှာ မှ Mod တဈခုကနေ DotA ဆိုတာမှေးဖှားလာတယျ၊ လူကွိုကျမြားတယျ၊ နောကျပိုငျငျးမှာ Mod ရေးတဲ့သူကို Valve ကငှားလိုကျတယျ၊ Dota2ကို ထုတျတယျ၊ copy right ငွိနိုငျတဲ့ အတှကျ သီးခွား ဂိမျးတဈခုဖွဈသှားအောငျ သူ့ရဲ့ mechanic ကိုမပွငျပဲ တဈခွား ဇာတျလမျးနဲ့ နောကျကွောငျးတှပွေငျလိုကျတယျ။ လူကွိုကျပိုမြားသှားတယျ၊ ဒါပါပဲ၊ (ထိပျဆုံးမှာ အဲ့လိုရေးလိုကျလို့ရသားပဲ)။
Warcraft နဲ့ DotA ဆိုငျသလားမေးရငျ ဘာမှမဆိုငျဘူးပေါ့၊ Warcraft က Blizzard ကထုတျတဲ့ ကုမ်ဗဏီထှကျ real-time strategy game တဈခု၊ အဲ့လိုပဲ wow က MMORPG တဈခု၊ DotA က community ကပေါကျပှားလာပွီးတော့ community ကပဲ လမျးကွောငျးခဲ့တာ။ DotA နဲ့ Dota2နဲ့ဆိုငျသလားမေးရငျလညျး သီးခွားစီပါ။ Dota2က Valve ကနထှေကျလာတဲ့ သီခွား Stand-alone MOBA ပဲဖွဈပါတယျ။
ကြေးဇူးပါဗြာ။ အခုလို ဆုံးအောငျဖတျပွီး အဆငျပွမေယျထငျပါတယျ။
Tags dota2 mmorpg moba pc wow
Concurrent Player ၂ သန်းကျော်လာတဲ့ PUBG